McKnight waxaa ka go'an inuu si buuxda ula shaqeeyo la-hawlgalayaasha bulshada si loo dhiso Minnesota cadaalad ku dhisan.
Qeybta:Dayactir Saddex-bilood ah5 min akhris
Marka laga hadlayo Laba Masiibo, McKnight wuxuu ku dhawaaqay Deeqaha Labaad-Labaad
Inta lagu gudajiro daqiiqadaan aan caadiga aheyn ee taariikhda, beelaheena waa inay la tacaasho labo masiibo ah. Midka hore waa coronavirus dilaaga ah oo dilaa khubaro. Ta labaad waa midab-kala sooca habbeysan - waa mid horseeday dilkii George Floyd. Wadajirka Coronavirus iyo dilalka macno darrada ah ee booliisku u hayaan dadka madow ee madow ayaa ku khasbay waddankeenna inuu ku xisaabtamo xaqiiqada foosha xun ee cunsuriyadda nidaamku ku dheehan tahay dhinac kasta oo bulshadeena ah. Kala-duwanaanshaha jinsiyadeed ee maanta waxay ka yimaadaan siyaasadaha iyo nidaamyada ku guuldarreystay Black Minnesota iyo dadka asaliga ah iyo bulshooyinka midabka leh boqollaal sano.
Wadan ahaan, Covid-19 wuxuu si gaar ah u saameeyay dadka Madowga Madow ah, ee u dhimanaya cudurka in ka badan laba jibaar heerka cad, Latino, iyo Aasiya Americans, sida lagu sheegay falanqaynta ka socota nonpartisan. Shaybaadhka Sahaminta Warbaahinta Dadweynaha Mareykanka. U sinnaan la'aanta natiijooyinka caafimaad waxay xiriir la leedahay sinaan la'aan qaabdhismeed iyo isku-xirnaan la'aan baahsan oo ka jirta guud ahaan guryaha, shaqada, mushaharka, maalka, iyo qaybaha kale.
Golaha McKnight iyo shaqaaluhu waxay ka turjumayaan doorka Mu'asasada waqtigan waxayna dib u xaqiijiyeen qiimaha udub dhexaadka u ah sinnaanta - taas oo McKnight u arko mid muhimsan - oo ay ka go'an tahay inay si buuxda ula shaqeeyaan la-hawlgalayaasha bulshada si loo dhiso Minnesota cadaalad ku dhisan.
"Iyada oo ah saldhig ku saleysan goobta, McKnight waxay qaadataa aragti dheer, waxaana naga go'an inaan garab istaagno bulshooyinkeena hadda iyo mustaqbalka," ayuu yiri Debby Landesman, madaxa guddiga McKnight. “Sidii had iyo jeerba, waxaan u mahadcelineynaa deeq-bixiyeyaashayada iyo shuraakadayada, oo u baahan inay wax ka qabtaan dhibaatooyin badan bilihii la soo dhaafay. Waxay carqaladeeyaan oo horumariyaan bulshadeena waxayna dejiyaan koorsada wadajirka ah si loo soo kabsado, dib loo soo celiyo, iyo dib loo dhiso. ”
Sanduuqa Dib-u-furidda Ganacsiga ee East Lake wuxuu taageeri doonaa dib-u-dhiska degmada East Lake Street ee Minneapolis, oo ay hoy u yihiin qoysas badan oo yaryar iyo makhaayado ay muhaajiriin ku leeyihiin iyo dukaamada cuntada. Buundada Sawirka: Golaha Lake Lake
Deeqaha Labaad-Labaad Isugeyn Ku dhowaad $16 Milyan
Deeqbixinta-labaad ee 'McKnight' -da labaad ee-sannadka 2020, guddiga wuxuu gudoonsiiyey 103 deeq oo iskucelis ah $15.8 milyan. Isugeyntaas, $2.7 milyan ayaa ku baxay deeqaha wax-ka-qabashada ee loo yaqaan 'Covid-19' oo ka socda guud ahaan barnaamijyada. Waxaan hoosta ka xariiqnay shan ka mid ah deeqahaas hoosta ku xusan. Booqo our bogga jawaabta faafa liis dhammaystiran, oo ay ku jiraan $1 milyan oo loogu talagalay maalgelinta gargaarka qaybta waaxda fanka ee Minnesota. Liiska buuxa ee deeqaha-rubuc-labaad ayaa laga heli karaa annaga keydka macluumaadka.
Golaha Waddada Lake Street—$100,000 si loo taageero Sanduuqa Dib-u-furista Ganacsiga Bariga Lake Lake. Degmadda East Lake Street ee Minneapolis waxay hoy u tahay qoysas badan oo yaryar iyo makhaayado ay muhaajiriin ku leeyihiin iyo dukaamo raashin oo xirnaa ama si weyn loo xannibay inta lagu gudajiray tallaabooyinka xannibaadda ee gobolka oo dhan. Daraasiin ganacsi ayaa burburay ama burburay wixii ka dambeeyay dilkii George Floyd, taasoo sii xumeysey dhibaatada. Lacagtani waxay taageeri doontaa dib u dhiska degmadani dhaqan ahaan aadka u jeclayd.
Shabakada Fursadaha Dhaqaale ee Waqooyi (NEON)—$50,000 si loo taageero miisaaniyadda guud ee hawlgalkeeda. NEON wuxuu ku dadaaleyaa inuu ballaariyo fursadaha horumarinta dhaqaalaha isla markaana uu dhiso hanti loogu talagalay ganacsatada dakhligoodu hooseeyo ama dhexdhexaadka ah ee woqooyiga Minneapolis. In badan oo ka mid ah ganacsatada waqooyiga Minneapolis ayaa khasaaro maaliyadeed oo aad u weyn ka soo gaadhay xidhitaankii gobolka Covid-19. Aagga wuxuu u adkaystay xaalad kale oo adag markii degmada ganacsiga West Broadway waxyeello ay ka soo gaadhay dilkii George Floyd. NEON waxay gacan weyn ka geysan doontaa ka caawinta ganacsatada dib u dhiska iyo soo celinta firfircoonida iyo kala duwanaanta bulshada waqooyiga Minneapolis.
Xarunta Caddaalada Guriyeynta—$250,000 si looga jawaabo helitaanka guryaha iyo arrimaha xasilloonida ee Minnesota. Faafida coronavirus waxay si weyn u beddeshay nidaamka guryaha qaabab ku yeelan doona saameyn dheer. U doodayaasha guryaha iyo ururada bulshada ee ay hogaaminayaan iyo kuwa loogu talagalay dadka Madowga ah, dadka asaliga ah, iyo dadka midabka leh ayaa hada ku hawlan kala soocida gurmadka Covid-19. Lacagtani waxay taageeri doontaa shabakad waaxeed oo ka kooban ururro si loo horumariyo istiraatiijiyado ku saleysan bulshada oo loogu talagalay deganaanshaha muddada-dheer iyo muddada-dheer iyo cadaaladda
"Iyada oo ah saldhig ku saleysan saldhig, McKnight waxay qaadataa aragti dheer, waxaana naga go'an inaan garab istaagno bulshooyinkayada hadda iyo mustaqbalka." -LANDRIGA LANDESMAN, SIDA LAGU QAADO
Machadka Great Plains ee Horumar waarta—$250,000 si loo taageero Midwest Energy Iskaashiga dhiirigelinta federaalka iyo dadaallada dib u soo kabashada leh ee hadafka ah in sifiican dib loo dhiso kadib Covid-19. Maalgalintani waxay gacan ka geysan doontaa horumarinta qorshayaasha soo-kabashada dhaqaalaha ee gobolka oo dhan si loo yareeyo isbedelka cimilada, loo abuuro shaqooyin, loona horumariyo dhexdhexaadnimo dheelitiran oo loo dhan yahay ee Minnesota iyo Upper Midwest.
Sanduuqa Wergo Cusub—$250,000 oo loogu talo galay Sanduuqa Waxyaabaha lagu aaminay ee lagu taageerayo dadaalada aan xisbiyada ka dhaxayn si loo hubiyo doorasho xor iyo xalaal ah 2020. Covid-19 wuxuu muujiyey sida ay xaaladaha degdegga ah ee aan la fileyn ay halis gelin karaan daacadnimada nidaamkayaga doorashada. Faafida ayaa horeyba u carqaladeysay wareegga doorashada 2020, iyadoo dowlado badan dib u dhigeen doorashada koowaad iyo kuwo kale oo la halgamaya sidii loo dhisi lahaa boostada iyo maqnaanshaha codbixinta. Sanduuqa Doorashooyinka la Ammaanay wuxuu taageeri doonaa ururada aan dowliga aheyn ee wadanka si ay u qorsheeyaan, u yareeyaan, ugana jawaabaan halista doorashada, oo ay kujirto faragalinta gudaha ama shisheeyaha, si xun u adeegsiga fekerka, xakamaynta cod bixiyaha, iyo natiijooyinka doorashada.
Faafa ayaa ku baaqaya in deg deg loo kordhiyo si loo hubiyo doorashooyin xor iyo xalaal ah. Sanduuqa Doorashooyinka la Ammaano wuxuu taageeri doonaa ururada aan dowliga aheyn ee wadanka si ay u qorsheeyaan, u yareeyaan, ugana jawaabaan halista doorashada.
Ku soo dhawow ku soo dhawow saaxiibbada cusub
Wararka kale ee Aasaaska, waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhoweyno labo xubnood oo cusub oo shaqaalaha ah bishaan. Soo Baxayaasha DeAnna ku soo biirey agaasimaha barnaamijka Farshaxanka, iyo Kelsey Johnson waa maareeyaha kooxda barnaamijkayaga cusub, oo taageeraya barnaamijyada Cimilada Cimilada iyo Tamarta Midwest. Robyn Browning wuxuu ku biiri doonaa McKnight bisha Luulyo isagoo barnaamij ah isla markaana deeqo siiya kooxda farshaxanka. Maamulaha kooxdii hore ee Farshaxanka Latosha Cox ayaa ka tagtay Foundation bishii Abriil si ay u noqoto agaasimaha barashada Alliesies All mataanaha Magaalooyinka. Buuxa shaqaalaha wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo meel fog sababtuna tahay Covid-19 waxaana lagu heli karaa emayl.
Jawaabta McKnight ee Covid-19
Dhibcaha Guriyeynta Minnesota